‘अब निषेधज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्छ’ : पौडेल – Shasankhabar
‘अब निषेधज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्छ’ : पौडेल
बुधबार, १७ भदौ २०७७
कोरोनाको जोखिम बढेपछि रोकथामका लागि अहिले निषेधज्ञा लगाइएको छ । उद्योग व्यावसाय बन्द छन् । लामो समय उद्योग व्यावसाय बन्द हुँदा आर्थिक समस्या देखिन थालेका छन् । निषेधज्ञा नलगाए कोरोना फैलिने डर लगाए व्यपार व्यावसाय संकटमा पर्ने चिन्ता बढ्दै छ । रोगबाट जोगाउन खोज्दा भोकको संकट बढ्दै गएकोछ । यस्तो समयमा चितवनको उद्योगको अवस्था र निषेधज्ञामा उद्योगीहरुको धारणाका बिषयमा चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलसंग गरिएको कुराकानी :
निषेधज्ञा नबढाउन माग गर्नु भएको छ, किन ?
हो,हामीले लामो समयसम्म लागाइएको निषेधज्ञाले आर्थिक संकट आउछ । जिल्लामा साना ठुलागरी १५ सय उद्योग छन् । त्यसमा ३० हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन् । जिल्लामा उद्योग क्षेत्रमा २ खर्ब भन्दा बढीको लगानी छ । बन्द हुँदा दैनिक रुपमा १२ करोड घाटा भइरहेको छ । कुखुरा व्यवसायमा मात्र दैनिक ५ करोड बढी घाटा छ । अर्को असाध्यै संवेदनशिल बिषय भनेको धेरैको रोजागारी गुम्ने खतरा बढेको छ ।
निषेधज्ञा बढ्दै जाने हो भने चौपट अवस्था छ । त्यसैले अब स्वास्थ्य सुरक्षाको उच्च सावधानी अपनाएर उद्योग र व्यवसाय चलाउन पाउनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र वुझायौँ । स्थानिय प्रशासन यो बिषयमा संवेनशिल भएर सोचिरहेको होला भन्ने ठानेका छौँ ।
कोरोना बढ्दै छ,यस्तो वेला खुल्ला गर्दा झन समस्या हुदैंन ?
कोरोना बढ्दै गएको छ सत्य हो । कोरोनाको जोखिम कम गर्न लगाएको निषेधज्ञाको कारण व्यावसाय चौपट बन्दै गएको पनि अर्को सत्य हो । कोरोनाबाट पनि जोगीने उद्योग व्यावसायपनि चलाउने दुवै उपाय अब खोज्नुपर्छ । कोरोनाको जोखिम कम गर्नका लागि निषेधज्ञा मात्र निर्विकल्प पनि होइन की ? हामी सवैले यो बिषयमा सोच्ने समय आएको छ ।
चितवनमा उद्योग क्षेत्र नै जोखिममा छ भन्छन त ?
केही उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीमा कोरोना देखिएको छ । उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षाको ख्याल संम्वन्धित उद्योगले गर्नुपर्छ । आन्तरिक क्वारेन्टिन बनाएर,स्वास्थ्य सुरक्षाको उच्च सावधानी अपनाएर काम गर्न गराउन सवैलाई हामीले भनेकै छौँ । कम्तीमा पनि व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ आर्थिक संकटबाट जोगिनुपर्छ हामीले भनेको यही हो ।
निषेधज्ञा हटाएर गर्ने के ? तपाईहरुको सुझाव के हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आधा कर्मचारी राखेर बिहान ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने, इबैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उद्योग वा व्यावसायले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा कामदारले पूर्ण स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर दुई पाङ्ग्रे सवारीमा एक जना र चार पाङ्ग्रेमा चालकसहित दुई जना मात्र चढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था बनाइदिन हाम्रो माग हो ।
भीडभाड नहुने गरी पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर निर्माणजन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन,शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट विद्यार्थीहरुलाई पढाउनको व्यवस्थालाई औपचारिक मान्यता दिन र विद्यार्थी भर्ना गरी मासिक शुल्क उठाउन दिन अनुमति दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव सहितको माग हो ।
रोगको महामारीमा डराउनुपर्ने होइन र ?
डराउनुपर्छ । तर अब कोरोनासंग भागेर सकिदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिसकेको छ यो दुई बर्ष रहन सक्छ । स्वास्थ्य चेतना जगाउने, विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य सतर्कताका लागि सहयोगी बनाउने,गाउँ गाउँमा रहेका दुग्ध सहकारीमा व्यक्ती चयन गरेर स्वास्थ्य सचेतनाको श्रोत व्यक्ती तोक्ने,स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुलाई प्रयोग गर्ने र परिचालन गर्ने । जोगिदै र जोगाउदै काम गर्नुपर्छ अब ।
खुल्ला गरेपछि भिड बढ्छ कसरी नियन्त्रण हुन्छ ?
खुलाउँदै गएपछि भिड बढ्ने क्षेत्रमा तोकेरै प्रहरी परिचालन गर्ने,सामाजिक संस्था रोटरी लायन्स जेसिस जस्ता संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने त्यस्ता भिड बढ्ने स्थानमा उतिवेलै यस्ता समुहका प्रतिनिधलाई खटाएर भिड रोक्ने अभियान चलाउनुपर्छ । जोखिम बढेका क्षेत्रमा सवै पक्षको निगारानी बढ्नुपर्छ । आमनागरिकलाई जोखिमबाट जोगाउनका लागि आफैं सचेत हुनेगरी अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने भिडको समस्या आउदैन । किनकी हरेक व्यक्ती कोरोनाको असर प्रभावका वारेमा जानकार छन् । अब कोरोनासंग भाग्ने होइन कोरोनासंग जोगिदै आत्मवल बलियो बनाउदै सवै क्षेत्रलाई होसियारी पुर्वक चलायमान बनाउदै लानुपर्छ ।
सरकारको भुमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
संकट थपिदै गयो भने ६० प्रतिशत रोजगारी दिने लघु सान र मझौला उद्योग सदाका लागि बन्द हुन सक्छन । त्यसैले समयमै ख्याल राख्नुपर्छ भनेका हौं हामीले । ५ बर्षमा ३० खर्ब रेमिट्यान्स पठाउने कामदारहरु देश फर्कन सकस छ । सडकमा भोकाहरु बढ्दैछन् । हरेक ९० मिनटमा एक जनाले आत्महत्या गरिरहेको तथ्याँक नै सार्वजानिक छ । हरेक ३ घण्टामा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ । यस्तो समयमा निषेधज्ञा मात्र लगाएर बस्ने हो की प्रभावकारी अरु तयारी गर्ने हो ? खै सरकारको प्रथामिक्ता ।
यो समय बाटो पुल बनाउने भन्दा अस्पताल बनाउने योजना आउनुपर्छ । चितवनमा छोटो समयमा अस्पताल बनाउन सकिन्छ । आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव पुरा गर्न लाग्नु पर्यो । सवै पक्षको सहयोग लिएर तत्कालीन आवश्यक श्रोत साधन जुटाउन लाग्नु पर्छ । अब निषेधज्ञा मात्र लगाएर नागरीकलाई घरघरमा थुनेर मात्र समस्याको समाधान हुदैन ।
भरतपुर महानगरको चार वर्षः विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि
रसुवामा सुक्खा पहिरो पन्छाउन थालियो
ओमिक्रोन र डेल्टा भेरियन्टले सङ्क्रमणको ‘सुनामी’ ल्याउन सक्छ : विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन
बिहिबार, १५ पुष २०७८
स्तरोन्नतिपश्चात नेपाल थप सक्रिय बन्न सक्नुपर्छ : अमृत राई
सोमबार, ०५ पुष २०७८
नेपालको पुनर्निर्माणका उपलब्धि र अनुभव विश्वसामु राख्न सक्ने अवस्थामा छौँ : ज्ञवाली
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्याे : डा. चन्द्रमणि अधिकारी
कोरोनासँगै लामखुट्टे र पानीबाट सर्ने रोगको जोखिम बढ्यो, यी कुरामा ख्याल गरौँ
शुक्रबार, ०५ असार २०७७
सभामुखको जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाउन सक्छु: शिवमाया तुम्बाहाम्फे
बिहिबार, १९ मङि्सर २०७६
बैंकबाट ऋण लिँदै हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउँदा डुब्ने खतरा कम हुन्छ:निरज लम्साल
सनसनी मच्चाउने खालका समाचारकाे स्राेत पहिचान गराैँ
‘शान्ती, सुरक्षा र सुशासनमा संवेदनशिल छौँ’— प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेत